Ngaba amaMonks aseMabudist kunye namaNuns ayenziwayo?
Kutheni amaninzi amaninzi kunye namaMonks aseBuddhist ayengabonakali
Kusenokwenzeka ukuba uye wakuva ukuba amonki aseBuddha kunye namadongeni athabatha izibhambathiso zokungena. Oku kuyinyaniso, nangona kukho ukungabikho.
Eyona nto inkulu yiJapane; U Mlawuli waphelela ubunqabileyo kwikhondo ye-19, kwaye ukususela ngoko abafundisi baseJapan baye bahlala betshatile kunoko. Oku kuyinyaniso nakwii-Japanese Buddhist izikolo eziye zangeniswa kwiNtshona.
Ngethuba lokuhlala kweJapan eKorea ngekhulu lama-20 abantu baseKorea bakopisha umkhuba waseJapane kwaye batshata, kodwa ubomi obuntshatsheli bomtshato abubonakali babambelele ngokusisigxina eKorea.
Phantse yonke i-oda yaseMorea yasekhaya yaseKorea isala ngokusemthethweni.
Isithethe sakwaTibetan saseNyetemapa , zikho zombini kunye nezikolo ezingaphantsi kweekholethi. Isikolo se- Sakya saseBibetan Buddhism siye sasiqhutywa yindoda efanayo, engekho-clibate ukususela ngekhulu le-11; Izikhundla zobunkokeli zidlula kubaba kumntwana. Nangona kunjalo, nangaphakathi kwimiyalelo yesigqeba, kunokukho imitshato engokomoya phakathi kwabaqeqeshi be-tric, echazwe ngezantsi.
Eminye imiyalelo ye-monastic eMongolia - inxulumene ngokusondeleyo kodwa ngokuhlukileyo ngokwahlukileyo kubuBuddhism baseTibetan - yinto engabonakaliyo, kwaye abanye abakho.
Umfundisi oqeshwe kuzo zonke ezinye izikolo zaseBuddhism yiyona nto, nangona kunjalo, Oku kuye kwayinyani ukususela ngexesha leBuddha yembali . Uninzi lwabaninzi bee-Tibet kunye namantongomane, njengamagosa onke e-Burma, eCambodia, eChina, eLaos, eSri Lanka, eThailand naseVietnam.
Qaphela ukuba kwiBuddhism imiyalelo ye-monastic ayihlukanga kubabingeleli, njengoko kunjalo kwiKatolika.
Ininzi imiyalelo inezigaba ezimbini zokulungiswa, ukuqala kunye nokulungiswa ngokupheleleyo. I- nun briddhist nun okanye i- monk ehleliweyo yinto efanayo nombingeleli.
Imithetho kaBuddha yemithetho ye-monastic eyasungula ibhalwa kwiqoqo leetekisi ezibizwa ngokuthi yiVinaya , okanye ngezinye iiVinaya-pitaka.
Njengoko ubuBuddha besasazeka ngeAsia ngaphaya kweenkulungwane, kukho ubuncinane ezintathu kwiinguqulelo ezahlukeneyo zeVinaya, kodwa zonke zigcina imithetho ye-celibacy. Kubonakala imigaqo ye-celibacy ifumanekile ukususela ekuqaleni kweBuddha, ikhulu lama-25 edlulileyo.
UBuddha akazange amise ubuncwane ngoba kukho into ehlazo okanye esonayo ngesondo, kodwa ngenxa yokuba umnqweno wenyama unomfutho wokukhanyisa, kwaye kubantu abaninzi, umnqweno wesondo ngowona nto ihamba phambili kwaye iphikelela kwiminqweno. Into efanelekileyo kukuba umnqweno ngokwawo ulahleke, kunye nobuqhetseba - kulolu hlobo, ukuphepha kunoma yiphi na indlela yokuxhaswa ngokwesondo - iyaqondwa ukuba iyimfuneko yokuba loo nto.
E-Theravada ama-Buddhism oononinzi abavunyelwe ukuba bathabathe izandla kunye nomfazi; Akukho nunamthi angamthinta umntu. Umntu ohloniphekileyo waseThai u-Ajaan Fuang (1915-1986) wathi, "Isizathu sokuba uBuddha akazange avumele ukuba oogqirha babathintele abasetyhini akukokuba akukho nto iphosakeleyo ngabasetyhini. yoko kutheni kufuneka kugcinwe phantsi kolawulo. " I-Mahayana ilayini ye-orderly are not so strictly about not touching.
Imitshato yokomoya ekhankanywe kwangaphambili iyingxenye yeTibetan ephezulu ye- tantra , eyona isoteric.
I-Tantra isebenzisa imifanekiso yesondo kunye neembonakalo (jonga yab-yum ) njengendlela yokutshintshisa amandla omnqweno ekukhanyeni, kodwa iimfundiso nezenzo zamanqanaba aphezulu azinabalwanga noluntu. Abanye abathathi beTibetan be-tantra bathi akukho isondo sangempela esiqhubekayo, nangona abanye bebonisa ukuba mhlawumbi wenza.
Kwabaninzi bethu, iphuzu elibalulekileyo kukuba, nantoni na eyenzeka kuyo, imitshato ye-tantric yile (a) phakathi koogqirha ababini baphambili kunye nabalinganayo bokomoya abaye bamiselwa ngokupheleleyo iminyaka emininzi; kwaye (b) angagcinwanga imfihlo kwiimyalelo zabo. Xa i-monastic ephakamileyo ithatha iqabane elincinane kwaye lingenakuqala ukuya kwi-tantra ephezulu, oku akusiyo yendabuko; isondo sangaphambili. Kwaye abaqeshwe abaqhelananga abavumelani bodwa ngaphandle komphathi wabo kwesaziso nokwazi ukunika imvume.
Ukuba uqhuba kunye nawaphi na amaqela aseVajrayana awakutsho ngenye indlela, cetyiswa ukuba into ebaluleke kakhulu engeyona yendabuko kwaye mhlawumbi ixhaphazelekayo iyaqhubeka. Qhubeka ngokusemngciphekweni wakho.
Imbali yeNdlu yegolide kunye no-Akal Takhat e-Amritsar
Guru Gobind Singh kunye nesithembu
Ukwenza Ukuphila KwamaM Manga: Icandelo 1
Iingoma ezi-10 eziphezulu zePop yase-1997
"I-Pygmalion" Iingqungquthela kunye neMifanekiso
UMichael John Anderson - Umbulali weCraigslist
Iyini i-Whistle Register?